I-Matrox Monarch Edge Isiza Abasakazi Ukusabalalisa Okungcono Kwevidiyo Ebukhoma - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
I-BroadwayHD Iqala Inkonzo Yevidiyo Yesizukulwane Esilandelayo Yekusakazwa nge24i
Ikhaya » Okufakiwe » I-Matrox Monarch Edge Isiza Abasakazi Basabalalisa Okuqukethwe Kwevidiyo Okungcono
I-Matrox Monarch Edge Isiza Abasakazi Basabalalisa Okuqukethwe Kwevidiyo Okungcono
Indlela okuqukethwe kwevidiyo ekhonjiswa futhi kufakwa ngayo ikhodi ibalulekile, ikakhulukazi uma ukusebenza kahle nokusebenziseka kulula kakhulu njengoba izimfuno zekhwalithi ephezulu yekhwalithi ziqhubeka zanda. Ochwepheshe bezokusakaza bayakwazi lokhu, futhi nobuchwepheshe bokufaka ikhodi buvela ngokushesha njenge-4k, kungaba khona kuphela ikusasa lezithembiso phambili embonini yezokusakaza nezindlela umhlinzeki womkhiqizo wevidiyo othanda ngazo Matrox kunomthelela ekuqhubekeni kwayo. Uma kukhulunywa ngokuletha amandla angafinyeleleki futhi aqukethe amandla wekhodi ebanzi ye-H.264 codec, uMatrox ube ngumpetha ngesikhathi sayo njengomhlinzeki wemikhiqizo yevidiyo esezingeni eliphakeme yeminyaka edlule ye-35. Isiko leMatrox belilokhu liqhutshwa njalo ukuze lichume futhi liqambe emkhakheni wezobuchwepheshe obuphezulu. Kusukela i-1976, inkampani iphumelele emandleni ayo okukhiqiza imikhiqizo ephezulu kubachwepheshe bamavidiyo nabasakazo, njengoba iqhubeke nokushintsha nokuvela ngokuhamba kwesikhathi. Phambilini kulo Ephreli at I-2019 NAB Bonisa, UMatrox ukhombise umkhawulo wempumelelo yakhe ngokumbula isikhombisi sabo sakamuva se-webcasting, esihlome kahle Umkhiqizo weNAB 2019 Wonyaka ku-Remote Production & Best of Show Winner.
I-2019 yalo nyaka I-NAB Bonisa kube wumbukiso omuhle, njengoba uMatrox emembula Matrox Monarch EDGE, 4K / Multi-HD ukusakazwa kwewebhu nokushumeka kude kokukhiqizwa. Lokhu kufakwa kusabalalisa kunikeza abasakazwayo amandla amakhulu, i-low-latency, namandla ashukumisayo we-H.264, afakwe kumandla compact, amandla aphansi, kanye nokusebenza okuphathekayo. Okwenza le encoder isebenze kahle ukuthi isiza abasakazi ukuletha okuqukethwe okuhlukile futhi okuphoqayo ngokusebenzisa kwayo i-4K ephezulu (HFR), i-4K 360 VR, nokukhethwa kwamakhamera amaningi. Ngamagama alula, i-Monarch EDGE ivumela abahlinzeki bokuqukethwe ukuletha umuzwa wokubuka we-4K obabazekayo.
INDLELA INKOSI YAMANDLA Ithuthukisa Kanjani Ukusakazwa Kwevidiyo
Umphathi Wezokumaketha KweMatrox
Umphetho weMonarch ngokuqinisekile ulethe ubuchwepheshe obuningi bokuqamba ngaphakathi kwe-webcasting kanye nokusakaza, futhi lokhu kuboniswe kahle kwi-2019 I-NAB Bonisa. Umsebenzi weMonark Edge wachazwa ngumphathi wokukhangisa wezobuchwepheshe wale nkampani, UDani Maloney. Ngenkathi zimele I-Matrox ku-2019 NAB Show, UMaloney usho ukuthi njenge-encoder, i-Monarch Edge ayifaneleki kuphela ekufakweni kwevidiyo okunesivinini esikhulu, kepha ukuthi okufakwayo okune (i-12 sgi eyodwa, ama-3gsdi amathathu) angakwazi ukufaka umfudlana ogcwele we-4k 60 noma ku-multi-angle / imvelo enamakhamera amaningi afana nemifudlana esingethwe youtube bukhoma izindawo. Lokhu kuzovumela noma yisiphi isibukeli ukuthi sibuke okuqukethwe kusuka kukona elikhetheke ngokwengeziwe kuma-engeli amane atholakalayo okufakiwe okusifakiwe okuzobenza bakwazi ukubuka okuqukethwe okubukhoma.
Ekuxoxeni kusuka ohlangothini lokukhiqiza olude kakhulu, uMaloney uphinde futhi wakhuluma ngokusetshenziswa kwe-Monarch Edge ngemisakazo eminingi, ngokuyisebenzisa nge-4: I-2: I-2 10 ukusakaza kancane, ingenza lula izindlela zabasakazi zokuthola okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu futhi inciphise isidingo b-van (ukusakaza i-van). Ngokuyisisekelo, uma i-cameraman ibingahamba bese ifilimu isakazwa bukhoma somcimbi onjengomdlalo wezemidlalo, lapho-ke bebengaphuma endaweni, bangene kokuqukethwe okuhlungiwe, bakuthumele ngqo ku-studio ukukhiqizwa okukude ukunikeza okuphakelayo okubukhoma okuqukethwe okufanayo.
Kuningi esingakuxoxa uma kukhulunywa ngomhlaba wezokusakaza kanye ne-4k surge ebesebenzele ukuyivelisa. Ukusakazwa kwevidiyo kwenzeka ushintsho olungaphezu kwengqondo enkulu njengoba ubuciko obusha bokubeka abasakazi ekuvumelaniseni indawo ebanzi yezindlela ezigxile ekufakweni kokuqukethwe okungcono kwekhwalithi, kanye nokwenzelwa okulula kokukuthola nokukusabalalisa futhi ekusakazweni okubukhoma okuvela kuma-engela amaningi. Ukufakwa kwe-Matrox Monarch Edge kuvumele ukufakwa kwe-4K ngamanani entengo ephezulu (i-50 noma i-60 fps), ngenkathi i-OVP isingatha noma yikuphi ukwehla okungafuneki. Kungenxa yalolu hlobo lokusebenza ngobuchwepheshe olwenza ukuthi iMatrox ikwazi ukuthatha bobabili Umkhiqizo we-NAB 2019 Wonyaka ku-Remote Production & Best of Show Winner ne-InfoComm 2019 Best of Show Winner awards.
Ukuthola eminye imininingwane ngeMatrox ne-Monarch Edge, ke Chofoza lapha ukufunda kabanzi mayelana nokuthi kungani i-4K / Multi-HD I-Webcasting / Remote Production Encoder yenza iMatrox ingumthombo omuhle wokulethwa kokuqukethwe kwevidiyo yabasakazi.
Okuthunyelwe kwakamuva okwenziwe ngu-Andres Benetar (bona konke)
I-Statmux Manje Isitholakala ku-AWS Elemental MediaLive - Disemba 1, 2019
I-Aja's HDR Image Analyzer 12G Inikezela Ngekhwalithi ephezulu ye-4K / UltraHD HDR - Novemba 29, 2019
I-8th HbbTV Symposium nama-A2019 Shortlists Fincons Group - Novemba 14, 2019
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba 4K I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza Ikhompiyutha I-H.264 codec Ividiyo esezingeni eliphakeme IMATROX I-Monarch Edge I-engeli Multi I-NAB I-NAB 2015 I-NAB 2016 nab bakhombisa i-2019 NAB16 nabshow	2019-08-26
Ngaphambilini: I-Cooke Optics ivula indawo yaseChina ukuqhubekisa ukwesekwa komhlaba jikelele
Olandelayo: I-MOD Ihambisa i-VFX yabaNikazi bama-VMA
i-mLogic ne-axle ai inikezela nge-Smart mTape ™, isigcini semidiya esiphelele nokusesha inqwaba
Lokho Ongakufunda Kokusakazwa KweHollywood
IYunivesithi yaseSail Egcwele Iyasebenzisana Nenethiwekhi ye-TVU Yokunikeza Amandla Ezizukulwane Ezilandelayo Zezemidlalo
I-California Streamin '